Swift Nzvimbo dzekutamba dzinovandudzwa ichiwedzera nhau dzakakosha | IPhone nhau
Kusiyana nezvinoitika nemamwe mafomu eApple, vakomana vanobva kuCupertino vanoita kunge vakanganwa nezve Swift Kutamba nzvimbo yekutamba, iko kunyorera kwakanangana neruzhinji rudiki kuitira kuti vadzidze kuronga kubva pazera diki, nenzira yakajeka, yakapusa uye nenhamba yakakura yemienzaniso kuti nzwisiso ive nyore.
Swift Playgrounds 2.0 inosvitsa chinhu chitsva chinotendera vashandisi ku Nyorera kune vechitatu-bato zvemukati vanopa, kuwedzera kune izvo izvo Apple yatopa kare natively kubva ichi chikumbiro payakatangwa, saka isu tinogashira zviziviso pese pacho musiki paanowedzera zvinyorwa zvitsva papuratifomu, tichidzivirira kuti isu tinofanirwa kupinda muchirongwa kuti titarise.
Iyi yekuvandudza zvakare inosanganisira tsigiro yemarobhoti matsva senge IBM's TJBot neMekamon, nyowani nyowani inotitaridza zvese zviripo zvirimo, zvedu zvese nevechitatu, kuti tikwanise kuzviwana nekudzvanya pazviri. Chimwe chinhu chitsva chinowanikwa mubhatani idzva reZviwanikwa, icho chatinogona kuwana nzvimbo dzekutamba kubva kuFiles application pane iyo iPad, zvinyorwa zvemabasa eIOS uye mirairo iyo kusvika zvino yaingowanikwa kuburikidza bhatani.Menyu yekubatsira uye maturusi.
Zvinoratidza izvozvo iyo Apple yekuvandudza nharaunda ichiri chakakosha chikamu cheApple Uye neichi chishandiso, iwe unoda kuti vana vadiki vatange kufarira kugadzira mitambo kana kunyorera kwechero chikuva, kwete cheApple chete. Swift Playgrounds 2.0 inowanikwa kuti utorwe mahara kuburikidza neiyi link yandinosiya panopera chinyorwa ichi. Zvinoda zvirinani iOS 10.3 kuti ishande uye inongowanikwa chete iyo iPad, saka usazvinetse nekuitsvaga kubva ku iPhone, kana iyi Apple programming platform yakazobata pfungwa dzako.
Swift Mitambo Yekutambavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Swift Nzvimbo dzekutamba dzinovandudzwa ichiwedzera akakosha maficha maficha
Polymail inogadziridzwa uye ikozvino inopa mukana kune wese munhu kubva pawebhusaiti